ShowLike - Movie and Videos
Home (current) ပင်မစာမျက်နှာ (current)
Show Like မှကြိုဆိုပါသည်။Show Like ကိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် Show Like မှရရှိနိုင်သောservices များကိုအသုံးပြုလိုပါက Blue Planet မှချမှတ်ထားသော ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများကို သဘောတူလိုက်နာရမည်။ ထိုစည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများကို သဘောမတူပါကShow Like Application သို့မဟုတ် Show Like Application မှအခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုစည်းမျဉ်းများနှင့် အခြေအနေများကို အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲ ထပ်ထည့်ပိုင်ခွင့်၊ ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်များသည် Blue Planet တွင် မူပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါသည်။ ထိုပြောင်းလဲမှုများကိုသိရှိနိုင်စေရန်အခါအားလျော်စွာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲသွားသော စည်းမျဉ်းနှင့် အခြေအနေများကို လက်ခံနိုင်ပါက Show Like Application ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၂။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်ထည့်သွင်းခြင်း
Show Like Application တွင်ရရှိနိုင်သော အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ်အသင်းဝင်ကြေးများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ထိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောအစီအ စဉ်များကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသင်းဝင်လိုပါက သင်၏ လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကို တိကျစွာဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကိုလိုက်လျောရန်ပျက်ကွက်ပါကဖြစ်ပေါ်လာသောပျက်စီးရှုံးမှုများသည် Show Like Application နှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ တာဝန်မရှိပါ။
Show Like Application နှင့် ၎င်း၏ဆက်စပ်သောဒီဇိုင်း၊ စာလုံးအမှတ်အသားတို့သည် Show Like Application ၏မူပိုင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပင်ဖြစ်သည်။ Show Like Application သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင်ဖော်ပြအသုံးပြုထားသော အမှတ်တံဆိပ်များကိုပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရေးသား ဖော်ပြခြင်းများကိုတင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
Show Like Application သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသောအခါ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများကိုလိုက်နာရန်သင်သဘောတူရမည်။ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကို Blue Planet မှစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍အသုံးပြုသူများအားတရားစွဲဆိုခြင်း အတွက်ဥပဒေအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သင်လက်ခံရမည်။
Show Like Application နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်၍ အသုံးပြုခြင်းနှင့် တစ်ပါးသူများကို အားပေးအားမြောက်ပြုခြင်း
ဥပဒေချိုးဖောက်သော၊ အသရေဖျက်သော၊ မမှန်ကန်သော၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေခြင်းများကိုမပြုလုပ်ရန်သင်သဘောတူရမည်။
၅.၁။ Show Like သည် Blue Planet မှထောက်ပံ့ထားသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။
၅.၂။ Show Like ဝန်ဆောင်မှု (7)ရက်စာအတွက် 499ကျပ် (အခွန်၅% အပါအဝင်) ဖြင့် ကောက်ခံသွားပါမည်။ (7)ရက်စာအသုံးပြုပြီးပါက ဝန်ဆောင်မှုသည် အလိုလျောက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ထပ်မံအသုံးပြုလိုပါက ဝန်ဆောင်မှုကိုထပ်မံရယူရပါမည်။
၅.၃။ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီအောက်ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများကို သဘောတူရမည်။ ထိုစည်းမျဉ်းတွင် Show Like Application ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အသုံးပြုသူကြား ဥပဒေရေးရာ သဘောတူညီချက်များပါဝင်သည်။ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါက၎င်းစည်းမျဉ်းများကို သင်သဘောတူသည် ဟုယူဆပါသည်။ သဘောတူညီမှုမရှိပါကထိုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၅.၄။ ထိုဝန်ဆောင်မှုကိုတစ်ပါးသူအားအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုမည်ဆိုပါက ထိုသူသည်စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန်နှင့်ထိုသူ၏အပြုအမူများ၊ပျက်ကွက်မှုများကိုသင်တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။
၅.၅။ Show Like Application ဝန်ဆောင်မှုသည်ထိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အချိန်မရွေးပြုပြင်မွမ်းမံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ထိုကဲ့သို့ပြုပြင်မွမ်းမံထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသင့်အနေဖြင့်အခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၅.၆။ Show Like Application ဝန်ဆောင်မှုသည် ထိုဝန်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို third party များကိုအသိပေးခြင်းမရှိဘဲအချိန်မရွေးပြုပြင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ထိုပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကိုလက်ခံနိုင်ပါကသင်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၅.၇။ ShowLike Application ဝန်ဆောင်မှုမှအပ အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသင့်အားထောက်ပံ့ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
၅.၈။ ၎င်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက် တားမြစ်ချက်များသည် လှုပ်ရှားမှုများ၏ စာရင်း အပြည့်အစုံမဟုတ်ပါ။ Show Like ဝန်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချိုးဖောက် သည့်အရာများကိုဆုံးဖြတ်ရန် Blue Planet တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိသည်။
သင်သည် Application ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများဥပဒေ၂၀၁၇ နှင့်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြားဆက်စပ်မှုဥပဒေများနှင့်အညီလိုက်နာရမည်။ သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူအမည်အောက်ရှိလှုပ်ရှားမှုအားလုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ထိုသဘောတူညီချက်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပြီးသင်၏အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုခွဲဝေပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ ထိုစည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများသည် Blue Planet နှင့် Show Like Application ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်းကြားမှသဘောတူညီမှုဖြစ်ပါသည်။
၎င်းစာချုပ်ရပ်စဲခြင်းအပေါ် ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို Show Like Application အား uninstall လုပ်ခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။
သင်သည် ထိုစည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများကို တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ တိုက်တွန်းချက်မပါဘဲလွတ်လပ်စွာသဘောတူပါသည်။ ထိုသဘောတူညီမှုများတွင်ပါဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကိုယ်တိုင်လိုလားစွာဆန္ဒရှိပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါစည်းမျဉ်းနှင့်အခြေအနေများအပေါ် တစ်စုံတစ်ရာမေးမြန်းလိုပါက Hotline: 01-2399188 နှင့် Email: tech.vas@blueplanet.com.mm သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Show Like Application တွင် အောက်ပါအချက်များနှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဆက်နွယ်နေသော video များကို တင်ခွင့်မရှိပါ။
၁. ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲ အခြား third party များ၏ video များကို သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရယူဘဲ တင်ခြင်းများ၊
၂. ညစ်ညမ်း video များ၊
၃. တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ခြိမ်းခြောက်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု၊ အသရေဖျက်မှု ၊ သူများ privacy ကို ကျူးကျော်ထိပါးမှု ၊ လူမျိုးရေးဝါဒီနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုးစစ်ဆင်မှု ၊ သို့မဟုတ် တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ထောက်ခံခြင်း စသော မည်သည့်စည်းမျဉ်းဥပဒေများကိုမဆို ချိုးဖောက်သည့် video များ၊
၄. မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအား ထိပါးချိုးဖောက်သော video များ ၊
၅. ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ video content မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူများ၏ video များကို မူလအဓိပ္ပာယ်ပျောက်အောင် အသွင်ပြောင်းသရော်ထားသော video များ၊
၆. ရန်ပုံငွေများတောင်းဆိုခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ စပွန်ဆာတောင်းခံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်နေသော video များ၊
၇. ဗိုင်းရပ်စ် ကွန်ပျူတာကုဒ်များ၊ ဖိုင်လ်များပါဝင်သည့် အစီအစဉ်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် မည်သည့်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် ဆော့ဖ်ဝဲ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ဖျက်ဆီးခြင်းများလုပ်နိုင်သည့် video များ၊
၈. အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ (အချိန်မီပြင်ဆင်/ပြုပြင်ထားသော video များမှလွဲ၍) မှ တစ်စုံတစ်ခုငြိစွန်းနေသော video content များကို ပယ်ချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Application အား Download ရယူရန်။